ASA FANAOVAN-GAZETY : Nasaina teny Iavoloha haka vaovao kanefa nahilika sy natao tsinontsinona. | Canalnews Madagascar
Home SOCIAL ASA FANAOVAN-GAZETY : Nasaina teny Iavoloha haka vaovao kanefa nahilika sy natao tsinontsinona.
By Nirinafév 07, 2015, 20:23 0
Tsy voalohany na faharoa no nahilika sy natao tsinontsinona tahaka izao ny mpanao gazety. Maharatsy endrika imason’ izao tontolo izao ny toy zao, hoy ny filohan’ ny holafitry ny mpanao gazety Malagasy Gérard RAKOTONIRINA. Azo lazaina fa sahirana vao tonga eny Iavoloha ny mpanao gazety kanefa dia fanilikilihana no nahazo azy ireo ka noho izany dia mitaky ny fandaminan’ ny fiadidian’ ny repoblika ny fomba fandraisana azy ireo izy, rehafa nasaina ka tonga. Toy izany koa ho an’ ireo andrim-panjakana isan-karazany. Nomarihany fa naneho fialan-tsiny taminy ny talen’ ny fifandraisana ao amin’ ny fiadidiana ny repoblika. Tamin’ ny zoma 06 febroary lasa teo teny Iavoloha no nitrangan’ ity tsy firaharahiana mpanao gazety ity.
Vaovao tsy tiana havoaka ve no antony hanaovana ny fanilihana toy izao ? Nefa anie ka zava-dehibe ho an’ ny vahoaka malagasy ny nitranga teny e ! Rahoviana vao mba haka lesona amin’ ny lasa ny mpitondra fanjakana raha ny mpanao gazety fotsiny no resahina ka hametraka azy amin’ ny toerana tokony hisy azy. Ny fiverimberenana amin’ ny hadisoana midika tsy fahaizana ka tokony hisy fiofanana ataon’ ny tompon’ andraikitra voakasik’ izany mihitsy raha tiana ny tsy hitrangan’ ny fanilikilihana. Manginy fotsiny ny fanarahana baiko ka na minisitra hiditra ao Iavoloha dia atao sava hao . Tsy hita zay maha minisitra azy fa mitovy amin’ ny olon-tsotra ihany rehafa hiditra ao an- dapa. Hatahorana anao inona moa ny minisitra zay nasaina ?
Interview : Gérard RAKOTONIRINA
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/GERARD-RAKOTONIRINA-1.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/GERARD-RAKOTONIRINA-1.jpg »] Gérard RAKOTONIRINA [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/GERARD-RAKOTONIRINA-2.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/GERARD-RAKOTONIRINA-2.jpg »] Gérard RAKOTONIRINA [/image_slider]
TAGASA FANAOVAN-GAZETY canalnews canalnews madagascar canalnews.net Gérard RAKOTONIRINA madagascar
Previous PostTELETHON : Nanolotra izay voa-tsirambin’ ny tanana ny fikambanana HAFARI Malagasy Next PostCUA: Ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra indray no laharam-pahamehana fa tsy ny mpianatra.
FISAMBORANA AN’ I ALAIN RAMAROSON : nambanana basy ny mpanao gazety nanao ny asany